भूकम्प कसैलाई अवसर कसैलाई सर्वस्व | langtangnews.com
सबै जना नयाँ घर बनाउने भन्छन् । मलाई त एउटै चिन्ता छ । तीन जना छोराहरू छुट्टिएर बसेको धेरै भयो, मसहित अव ४ वटा घर बनाउनुपर्ने छ, तर हामीसँग जम्मा ४ आना मात्र जग्गा छ । त्यो पनि पासाङल्यामु सडक खण्डको १५ मिटरभित्र पर्छ, सडकले अधिग्रहण गरिदियो भने हामी पूर्ण सुकुमबासी हुनेछौं । पहिले जग्गा किन्यौ पछि सडकले १५ मिटरको सीमा निर्धारण गरिदियो । अव घर कहाँ र कसरी बनाउने ? धैबुङ– १ इटपारेकी ८० वर्षिया मनमाया परियारको दुःखेसो हो यो ।
आफ्नो परिवारलाई न्यानो ओतमा राख्ने एक टुक्रा पनि जमिन नभएपछि धैबुङ– १ का मुरली नेपाली परिवारसहित गाउँ नजिकैको सार्वजनिक जमिनमा सानो झुपडी बनाई बसेका छन् । उनी २० वर्षदेखि त्यही बस्दै आएको बताउछन्, उनीसँग एक टुक्रा जमिनको पनि लालपुर्जा छैन । भूकम्पले उनको घर पूर्ण क्षति भयो । मुरलीको घर भत्कियो, गाविसले पूर्ण क्षति भएको व्यहोराको भूकम्प पीडित परिचय पत्र दियो यस अघिका सबै राहत सामग्री र रकम पनि लिए । उनी अहिलेसम्म जस्तापाताले अस्थायी टहरो निर्माण गरी बसोबसा गरिरहेका छन्, तर अव आवास निर्माणको लागि पाउने २ लाखबाट वञ्चित हुने भएका छन्, किनकी उनीसँग पनि आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन ।
धैबुङ गाविस १ बेतिनीमा २० घरधुरी छ । ती मध्ये १५ घरधुरी रहेको जग्गा हालसम्म पनि बिर्ताअन्तर्गत रहेको र किसानहरूसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नहुँदा उनीहरू पनि आवास निर्माणको लागि सरकारबाट पाउने २ लाख लिनको लागि सम्झौता गर्नबाट छुटाइए । कारण थियो, लालपुर्जा नहुनु । वर्षाैदेखि आफैंले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व बिर्तावालासँग छ । बिर्तावाला को हुन् उनीहरु चिन्दैनन् । सरकारले गाविस कार्यालयमार्फत सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । घर जहाँ बनाउने हो त्यहीको कित्ता नम्बर उल्लेख हुने गरी लालपुर्जाको फोटोकपी बुझाए मात्र सम्झौता हुन सक्ने नत्र नहुने भनेपछि बिर्ता पीडित किसानहरू पनि यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रसुवा जिल्लामा अझै पनि बिर्ता समस्या बाँकी रहेकाले धेरै किसानहरूले विभिन्न अवसरबाट वञ्चित पारिँदै आएका छन् ।
रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चेसँग आमुने–सामुने रहेको हाकु गाविस अति विकट गाविस मानिन्छ । भूकम्पको कारण लाङटाङपछि हाकु धेरै क्षति व्यहोर्ने गाविसमा पर्छ । उक्त गाविसको वडा नं. ८ र ९ त पूरै विस्थापित नै हुन पुग्यो । तर वडा नं. २ देखि ७ सम्म ६ वटा वडाका कुनै पनि बासिन्दासँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन, किनकी सबै जमिनको स्वामित्व गुठीको नाममा छ । हाकुबासी अहिले धेरै चिन्तीत बनेका छन्, किनकी नयाँ घर निर्माण गर्नको लागि आवास निर्माणको लागि अनुदान पाउनको लागि अनिवार्य जग्गाधनी पुर्जा चाहिने भनेको छ । लामो समयदेखि लालपुर्जा लिनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका हाकुबासी गुठीपीडित आफूहरूसँग पुर्जा नभएकै कारण वञ्चित गराइन लागिएको भन्दै धेरै चिन्तीत छन् ।
घर जहाँ बनाउने हो त्यहीको कित्ता नम्बर उल्लेख हुने गरी लालपुर्जाको फोटोकपी बुझाए मात्र सम्झौता हुन सक्ने नत्र नहुने भनेपछि बिर्ता पीडित किसानहरू पनि यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
भूकम्प कसैलाई अबसर कसैलाई सर्वस्य भनेझै भएको छ । हुनेलाई खातैखात नहुनेलाई पुनपुरोमा हात भन्ने नेपाली उखान यतिबेला भूकम्प पीडितलाई भएको छ । जोसँग लालपुर्जा छ, जोसँग जमिन छ, जोसँग घर बनाउन सक्नै हैसिएत छ, आज उनीहरूलाई सरकारले पहिला अनुदान रकम वितरण गर्दै छ, जसलाई सहयोगको अति आवश्यकता छ, कसैको सहयोग बिना उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, आज उनीहरू वञ्चित पारिँदैछन्, उनीहरू झन गरिबीतर्फ धकेलिँदैछन् । गरिबीको पक्षमा कसले बोल्ने, कसले आवाज उठाउने ?
माथिका उदाहरण प्रतिनिधि हुन, धनी वर्गलाई कुनै समस्या छैन, उनीहरूसँग जग्गा छ, पुर्जा छ, चिनजान छ, पहुँच छ तर, गरिब वर्गसँग केही छैन, उनीहरू वर्षाैदेखि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गराइदै आइएको छ । नेपालमा भूकम्पले तहस–नहस पारेको १७ महिना पुग्यो । ढिला गरी हुन लागेको पुनर्निर्माणमा पनि धेरै भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम पाउने अवसरबाट विभिन्न बाहनामा वञ्चित गराइदैछ । हजारौं भूकम्प पीडित सरकारको सहयोगको आशामा लामो समय कुरीबसे तर उनीहरू आज वञ्चित गराइदैछन् ।
केही हुने र क्षमता भएकाहले आफैंले बलियो संरचना बनाएर उहिल्यै बसेका हुन्, सानो हावाहुरी चल्दा पनि प्राण बचाउनै गाह्रो हुने गरी बसेका भूकम्प पीडित जो गरिब छन्, उनीहरूलाई छुटाइनु गरिबमाथिको थप अन्याय हो । भूकम्प केहीलाई स्थापित हुने राम्रो अवसर भएको छ भने केहीलाई सर्वस्य गुमेको छ । गरिबहरूको जे जति थियो त्यो सबै गुमेको छ ।
सरकारले विभिन्न स्थानबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अनुदान दिने भनेर सम्झौता त सुरु गरेको छ । तर गाउँमा अझै धेरै समस्या र विवादहरू बाँकी छन् । अनी सरकारको काम गराइको ढाँचा पनि यहि नै हो खै कहिले बन्ला पीडितको घर ?